Tsy mba misy eto amintsika mihitsy ny kolontsain’ny famokarana fa ny fiarovana ny mpitondra sy ny tompon’andraikitra tsy mamokatra sy tsy mahefa ny asany ary manao fahadisoana mihitsy no kolontsaina napetraka. Niaraha-nahita sy naheno ny fandikan-dalàna nataon’ny tafika tamin’ny fananiham-bohitra teny Analakely ny herinandro lasa teo saingy tsy mbola nisy ny didy fanalana na fanasaziana ny tompon’andraikitra ambony tsy mahafehy ny asany. Kiantranoantrano no manjaka ka zary filibana sy fangoronan-karena ny fananana toerana ambony. Manao volo ngita mifandray tendro ny samy mpitondra ka mifampiaro sy mifanavotra hatrany ka mamotika ny firenena. Ny sehatra rehetra dia toy izany avokoa. Ny minisitera iray dia lasa minisiteram-pianakaviana ka samy manao izay danin’ny kibony ny mpianakavy. Ny orinasam-panjakana lasa fanaovan’ny mpitondra bizina ka mitotongana sy banky ropitra. Tsy any amin’ny harem-pirenena irery ihany no anjakan’ilay teny hoe atao tantely afa-drakotra fa ny zava-drehetra, hany ka mitambatra ho hery lehibe mamotika ny fiainam-pirenena ny firaisan-tsaina sy firaisankinan’ny mpitondra hanjakazaka fa tsy mba hifaninana amin’ny tsara ka hametraka ny kolontsain’ny famokarana. Rahoviana ihany vao mba hiova e ?